Archive du 20200414
Komity LOHARANO Inona marina moa no tena asany ?
Nanazava momba ny andraikitry ny Komity Loaharano ny ministry ny harena an-kibon` ny tany, Fidiniavo Ravokatra ka nambarany fa hiandraikitra ny fanantanterahana ny lamina rehetra momba ny ady amin’ny “coronavirus”
Fampielezana vaovao tsy marina 40 ireo raharaha atao fanadihadiana amin’izao
Nahazo vahana ny fanelezana vaovao tsy marina nanomboka tamin’ny fanombohana ny fihibohana no mankaty.
Minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Nanadino ny artista sy ny mpanao gazety
Maro amin’ireo artista no mitaraina fa voadona mafy ny fivelomany ao anatin’izao fihibohana vokatry ny fiarovan-tena amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina COVID 19 izao ka mangataka fanampiana.
Zandarimariam-pirenena Nanara-maso akaiky ny asa ny lehibe
Nidina ifotony tany amin'iny lalam-pirenena voalohany iny ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka, ny faran’ny herinandro nanoloana ny asa mankadiry nosahanin'ny zandarimaria nandritra ny fetin’ny Paska teo izay mbola ao anatin'ny fihiboana tanteraka.
Raim-pianakaviana marary any Afrika atsimo Sahiran-tsaina ny vady aman-janany eto Madagasikara
Renim-pianakaviana monina eny Ankadindravola Ivato eny i Vero. Efatra ny zanaka naterany, telolahy iray vavy.
Kolonely Ravoavy Zafisambatra Nisy ny fanararaotana nandritra ny alatsinain’ny paska
Maro ireo olona nety ho nanana fikasana hivoaka an’Antananarivo omaly alatsinain’ny paska.
Ivahona Betroka Mitanila ny fampiharana lalàna
Tena mitanila ara-bakiteny ny fampiharana lalàna any Ivahoana Betroka amin'izao fampiharana ny lalàna amin'ny fampiharana ny fijanonana
FFKM Maika ny famonjena ny sosialim-bahoaka
Mampahery antsika rehetra noho ny ahafahantsika fiangonana miombona ato amin’ny FFKM miaraka mankalaza ny paska na eo aza izao toe-javatra manokana iainana izao, hoy ny FFKM,
Kardinaly Désiré Tsarahazana Iriantsika ho mpandresy isika
Ho fankalazana anefa ny fetin’ny paska ny alahady teo dia nivantana tao amin’ny fahitalavim-panjakana (Tvm)
Papa Fransoa Niantso fanamaivanana ny trosa
Fiainan` ny olona an-tapitrisany no niova tampoka nandritra ny herinandro maromaro noho ny valanaretina “coronavirus”.
Harena an-kibon'ny tany Nampiato ny fitrandrahany i Ambatovy
Naato tanteraka ny fitrandrahana ao amin’ny orinasa mpitrandraka Nikela sy Kobalta Ambatovy.
Fitaterana ana habakabaka Afaka 3 taona vao mety ho tafarina
Efa tafiakatra hatrany amin’ny 250 miliara dolara amin’izao fotoana izao no fatiantoka mihatra amin’ny ankamaroan’ireo kaompaniam-pitanterana ana
Serge Zafimahova Hovonoina ve ny orinasa Malagasy?
Hovonoina ve ny orinasa Malagasy. Matoa isika lahazo fanampiana avy amin’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) izay aty amin’ny fanjakana foibe no niditra an-tsehatra dia izay hiatrehana ny fifandanjana na ny « balance de paiement » amin’ny lafiny teknika.
Sarimihetsika Malagasy Rodimandry i Ra-jacky malok′ila
Nodimandry ny alahady 12aprily2020 andron'ny paska teo. Randrianjafy Zakavola na Ra-jaquis mpilalao tao amin'ny Scoopdigital.
Fanendahana amin'ny andro paska Roalahy nitondra antsy tratra teny Antohomadinika
Tsy atoandro tsy alina fa tena mangina tanteraka ny tanana eto amintsika, indrindra fa manomboka amin’ny 12 ora atoandro iny, fotoana voafetra tsy hahafahana mivoaka ny trano iny.
Vaky trano teny Iavoloha Mpihavana avokoa ireo olona 8 voasambotra
Nitrangana vaky trano teny Iavoloha ny 20 martsa lasa. Nokorontan'ireto jiolahy avokoa ny entana tao an-trano nandritra izany ary ny kitapo misy vola mitentina 40 tapitrisa ariary ihany no lasan'izy ireo .
Paska hafakely Nidina avokoa ny vidin’entana
Anisan’ny fety tena manan-danja ho an’ny isan-tokantrano ny fetin’ny Paska. Tamin’ity indray mitoraka ity anefa dia niavaka izany noho ny fahasahiranana nateraky ny fihibohana.
Fizarana vola fisotroan-drorono Hanomboka ny 17 aprily izao
Hanomboka ny zoma 17 aprily izao ny fizarana ny vola fisotroan-dronono ka ho an’ny faritra Analamanga sy Atsinanana ary Matsiatra ambony moa no
Toamasina Hitokona indray ireo mpamily Tuk Tuk
Saika miverina amin’ny fiainany an-davanandro ny rehetra ao Toamasina I , misokatra ny tsena ,
Fanafodin’ny coronavirus Ho avy tsy ho ela ny fanambarana miezinezina ?
Amin'izao andron'ny Paska izao dia hafatra mifono fanantenana no entin'i Madagasikara ho an'izao tontolo izao noho ireo zavaboahary ananany izay tsy hita afatsy eto amintsika ny 80 isan-jatony,
Distrikan'i Maevatanana Nahitana tranga mampiahiahy
Lehilahy iray monina any Mahatsinjo ambony no fantatra fa nanatona ny mpitsabo tany an-toerana satria nahatsapa fa misy ireo soritr'aretina mifandraika amin'ny Covid 19.Efa tonga any amin'ny CHRR Betsiboka ary arahamaso akaiky izy io,
Ampahimanga Ambohimanambola Tsy mbola nahazo fitaovana hanasan'ny rehetra tanana
Kaominina manodidina an'Antananarivo-Renivohitra ny kaominina ambanivohitra Ambohimanambola izay manana ny fokontanin'Ampahimanga
Andrefanambohijanahary 75 tafo tsy mbola nahazo fanampiana
Trano hazo 75 tafo etsy Andranomaria Andrefanambohijanahary hatreto no fantatra fa mbola tsy nahazo fanampiana tany amin’ny fitondram-panjakana mihitsy.
Andriatsima Faneva Ima (BAREA) Nanolotra fanampiana ho an'ireo mpitsabo Malagasy
Tamin'ny alahady 12 aprily atoandro lasa teo no nanatitra izay voatsirambin'ny tanana ho fanampiana an'ireo mpitsabo sy ny mpitsabo
Polisim-pirenena Manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra
Misy ny lamina napetraka ho an'ny Polisy sy ireo olona manana anton-draharaha eny anivon'ny Minisiteran'ny filaminam-bahoaka ka tsy maintsy hiditra ny faritra misy ny polisim-pirenena.
OMS Tsy atao maimaika ny fialàna amin'ny fihibohana
Nanamafy ny sampandraharahan’ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana (OMS) fa mila tandremana tsara ny fomba fialàna amin’ireo fepetra amin` ny fihibohana, tahaka ny nataon’i Chine.